यसपालिको धान जोगाउँ, खाद्य सकंटबाट बचौं « Pariwartan Khabar
21 May, 2020 6:20 pm
दुईजना नेपाली भेट हुन वित्तिकै एकले अर्कोलाई सोध्छन् – भात खानु भयो ? यसबाटै प्रस्ट हुन्छ कि, हाम्रो खानेकुरा भनेको नै भात हो । हुन पनि हो, हामी नेपाली भात मात्र धेरै खान्छौं । कोहि दिनको दुईपटक, कोहि तीन पटक, कोहि त चार पटक सम्म पनि भात खाएको देखेको छु मैले । “ हाम्रो खानपानमा कुल क्यालोरीको ४० प्रतिशत भातले योगदान गर्छ ” यो अध्ययनले पनि देखाउँछ कि भात हाम्रो जीवनमा कति महत्वपुर्ण छ ।
नेपालीको बिहान पनि भात र बेलुका पनि भात खाने चलन देखेर एक पटक एक जना विदेशीले मलाई सोध्नु भयो – तिमीहरु भात मात्र खान्छौ ?
भनिन्छ भातमा परनिर्भरता बढेपछि, पहाडका मानिसहरुले स्थानीय बालीहरु लगाउन छोडे । कर्णालीमा यो कुरा छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ । स्थानीयहरुले कोदो, उवा रोप्न छोडेर तराईबाट हेलिकप्टरमा लगिएको चामल खान थाले । सरकारले पनि स्थानीय बाली सम्बर्द्धन, प्रवर्धन भन्दा चामल ओसार्ने निती नै लियो । स्थानीय बालीहरुको उत्पादन पनि घट्यो । स्थानीय बालीको उत्पादनमा कमि, अनि बिना अनुदानको चामल हेलिकप्टरमा मगाएर किनेर खान नसक्ने भएपछि, ति ठाउँहरुमा खाद्य असुरक्षा बढ्यो ।
नेपालमा धानको बिउ छर्ने काम उच्चपहाडमा चैत्रबाटै शुरु हुन्छ भने तराईमा बैसाख/जेठमा बिउ छर्नुपर्छ । धान रोप्ने कामका लागि उच्च पहाडदेखि तराईसम्म जेठदेखि असार सम्म चल्छ । कृषकले बिउ किन्न, मल किन्न, खेत बनाउन, बिउ छर्न, कुलो बनाउन, धान रोप्न धेरै पैसाको जोहो गर्नुपर्छ, र उनीहरु लगभग बैसाख देखि श्रावणसम्म नबिसाई खेतीको काम गर्नु पर्छ । अनि मात्र फर्सिन्छ खेतीको काम । खेतीका कामहरु समुहमा गरिन्छन् । धेरै ठाउँमा बाहिरबाट मजदुर आएर खेतीमा सहयोग गर्थे , यसपाली त्यो सम्भावना पनि कम छ । त्यसैले यी सबै काम गर्न कृषकलाई मलबिउको अभाव, रोग सर्ला भन्ने डर र त्रासले असर गरेको छ ।
उत्पादन धेरै नै घट्यो भने चामलको भाउ आकासिएर, असोज देखि नै चामल किनेर खान सकिदैन । गरीब र मजदुरले काम पनि पाउँदैनन, पैसा पनि हुन्न, चामल किनेर पनि खान सक्दैनन् । दशैंको आसपासमा विदेशीएका धेरै दाजुभाई दिदीबहिनी आफ्नै देश र गाउँमा फर्केर आउँदैछन् । त्यतिबेला हामीलाई अझ धेरै चामल चाहिन्छ । झन भोकमरी लाग्ने डर हुन्छ । त्यसैले कोरोना कहरले यसपालिका चाडबाडहरु पनि निकै दुखले भरिएका हुन्छन् भन्ने संकेत गर्दैछ ।
कसरी बचाउने यसपालिको धान खेती
आफैं केहि गरौं : यसपालिको धान जोगाउन सक्यौं भने, हामी आसन्न खाद्य सकंटबाट बच्न सक्छौं । हामीले अब बहिरको र किन्ने बिउको मात्र भर नपरौं, आफुले राखेका बिउहरु पनि कृषि प्राबिधिकहरुसँग सोधेर छर्ने गरौं । छरछिमेकमा आफुले राखेको बिउ पैचो दिउँ, अरुलाई पनि रोप्न दिउँ । अहिले पैंचो दिएर उत्पादन भएपछि डबल लिने होइन बराबरीमा साटौं । आफुसँग श्रम हुनेहरुले छिमेकीकोमा सल्लाह गरेर श्रम दिउँ । पैसा अहिले छैन भने सिजनमा धान फलेको बेला त्यहि उपज नै लिउँ ।
के गर्न सक्छ सरकारले: स्थानीय सरकार र कृषि कार्यालयहरुले मल र बिउ ढुवानी गर्नका लागि ढुवानी निशुल्क अथवा भारी छुट गरिदिऔं । देशभित्र उत्पादन भएको बिउ, देश भित्र भएको मल जसरी पनि कृषककोमा पुगोस । यसपालि अलिक बढी पानी पर्दैछ । छिटै बर्षा हुन सक्छ, त्यहि भएर जेठको १५ भित्रमा नै ढुवानीको काम सक्नुपर्छ । त्यसकारण, सेना प्रहरी परिचालन गरेर भएपनि देशभित्र भएका मल र धानका स्टकलाई यथासिघ्र कृषकको घरमा पुर्‍याउँ ।